Boob iyo bililiqo baahsan oo ka socota Koofur Afrika | KEYDMEDIA ONLINE
Boob iyo bililiqo baahsan oo ka socota Koofur Afrika
Rabshado ka dhashay xarigga Madaxweynihii hore ee South Africa Jacob Zuma, ayaa ku faafay guud ahaan dalka, waxayna horseedeen boob baahsan oo lagula kacay xarumo ganacsi oo qeyb ka mid ah ay ganacsato Soomaaliyeed leeyihiin.
JOHANNESBURG, Koofur Afrika - Dukaamo ayaa la bililiqeystay habeenki xalay, waxaa xirmay guud ahaan ganacsiyada ku yaalla waddooyinka waaweyn ee magaalada Johannesburg maalintii axadda, iyadoo rabshadaha oo goos goos ku billowday ay ka dhasheen xarigga Madaxweynihii hore ee South Africa Jacob Zuma.
Inkastoo boolisku isku dayayo inuu xakameeyo rabshadaha ka socda magaalooyinka waaaweyn, hadana boob iyo bililiqo xooggan ayaa laga soo sheegayaa tuulooyinka fogfog, waxaana galinkii danbe ee shalay ilaa xalay cagta la mariyay goobo ganacsi oo ay dad Soomaaliyeed leeyihiin.
Markii hore rabshaduhu waxay inta badan ku urursanaayeen gobolka uu ka soo jeedo Zuma ee KwaZulu-Natal (KZN), hayeeshee xaalka ayaa hadda u muuqda mid faraha ka baxay waxaana waddooyinka isku hor fadhiyay taageerayaasha Jacob Zuma iyo ciidamada booliska.
Ganacsato Soomaaliyeed ee ku ganacsata tuulooyinka oo labadii maalin ee la soo dhaafay hantidooda ula qaxay magaalooyinka waaweyn, ayaa qaarkood isku dhiibeen booliska si naftooda iyo maalkooda loo badbaadiyo.
Madaxweyne Cyril Ramaphosa ayaa sheegay shalay in aysan jirin wax qiil ah oo loo heli karo rabshadaha isla-markaana ay dhaawaceyso dadaallada dib loogu dhisayo dhaqaalaha iyadoo ay jirto faafida COVID-19.
Hay'adda sirdoonka dalkaas NatJOINTS ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in 62 qof laga qabtay magaalooyinka KZN iyo Gauteng oo ah xarumaha dhaqaale ee ugu weyn waddanka tan iyo markii rabshadahu ay billowdeen.